Umphumela we-GRC Rock
Ulapha : Ikhaya>Product>I-GRC ephezulu yokuphela>Umphumela we-GRC Rock
Inombolo Model: I-sandstone ye-GRC
I-GRC (Glass Fiber Re Informed Concrete) ibizwa nangokuthi i-GRC. Igama laso lesiShayina ngokhonkolo oqinisiwe weglasi. Kusetshenziswa izinto ezihlanganayo ezisebenzisa usimende usimende njengokwenza izinto ezisetshenziswayo kanye nengilazi eyi-alkali engamelana nengilazi njengento yokuqinisa. Ngasikhathi sinye, futhi kufaka izengezo ezahlukahlukene zokuthuthukisa ukusebenza, imibala, njll. Inqubo yokukhiqiza ye-GRC ihlukile kakhulu. Ukhonkolo weglasi owenziwe ngomshini ufafazwa kuthempulethi ngokuthungwa okuhle, okungaqinisekisa ukuthi umkhiqizo ufinyelela ukubumbana okuhle, amandla nokumelana nokuqhekeka. Ikhwalithi yomkhiqizo okhiqizwe ngale ndlela ihlukile kakhulu kunenqubo ejwayelekile yokubumba ukhonkolo. EYurophu naseMelika, ishidi le-GFRC elilodwa-elingqimba lisebenzisa kabanzi njengebhodi langaphandle lokuhlobisa udonga.
5. Ukulondolozwa kwamandla nokuncipha kokukhipha: uma kuqhathaniswa nezinye izakhiwo ezivalekile, i-GRC isebenzisa amandla amancane ohlelweni lokwakha nokufaka. Izazi zaseJapan zenze ukuqhathanisa ukuphuma kwekhabhoni phakathi kwebhodi le-GRC wallboard nokuqinisa udonga kakhonkolo okuqinisekisiwe, futhi ukusetshenziswa kwebhodi ye-GRC wallboard kunganciphisa ukuphuma kwe-carbon ngo-30%.
Itshe lokulingisa le-GRC